पर्यटन :“टानले बिर्सियो, माछापुच्छ्रे उठ्यो”, कोर्चुङ पुगेर किन हर्षले धुरुधुरु रुन्छन् प्रर्यटक ? – Online Annapurna
पर्यटन :“टानले बिर्सियो, माछापुच्छ्रे उठ्यो”, कोर्चुङ पुगेर किन हर्षले धुरुधुरु रुन्छन् प्रर्यटक ?
२६ माघ २०७६, आईतवार १३:४५ February 9, 2020 402 Views
अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, माघ २६
साच्चिकै स्वर्ग जस्तो ठाउँ र हिमाली दृश्य, चराचुरुङगी, जनावर, वनपैदावर र विविध जटिवुुटीको अवलोकन, अग्र्यानिक खाना, मौलिक चालचलनलाई हेर्ने र बुझ्ने रमाउने इच्छा छ भने एक पटक माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक जानैपर्छ । अनि कसैलाई पनि लाग्छ त्यसपछि :“एक पटक मात्र होईन पटक पटक जाने ठाउँ पो रहेछ माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक ।” जहाँ पुगेर प्रकृतिको रसास्वादन गर्न सक्नेहरु दृश्यपान गर्दागर्दै हर्षले आँशु आँखाभरि टिल्पिलाउँदै धुधरुधुरु रुन्छन् । किन रुन्छन् ? उहि माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको मनमोहक सौन्दर्यले होईन् त ?
वर्तमान माछापुच्छ्रे नमुना पैदल मार्ग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्त बहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष मुक्तिनाथ तिमील्सिना, सचिव कुलप्रसाद अधिकारी लगायतको टीमलाई हौसला दिने, सकेको सहयोग दिएर अगाडी वढ्न प्रेरित गरेको छ सिंगो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले । वडा नं ९ का अध्यक्ष दुर्गा बहादुर क्षेत्री मोडल ट्रेकको लागि के गर्न सकिन्छ र स्थानियलाई संगसंगै कसरी लैजाने भनेर उत्पादनशिल काम लगायतका विभिन्न प्रयास गरिरहनु भएको छ । उता वडा नं ७ का अध्यक्ष सम बहादुर गुरुङ र अन्य वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरु यसको विकासको लागि एक मत भएका छन् ।
माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको लागि २०६७ सालबाट पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भनेर लाग्यौं । शुरुवातमा टान पश्चिमाञ्चलबाट केहि सहयोग भएको थियो । टानले स्वीटजरल्याण्डको एक संस्था मार्फत ग्रामिण पर्यटन विकास मार्फत त्यो बेला २६ लाखको वजेट ल्याएको हो । त्यो बेलामा ७ वटा गाविसलाई समेटेर माछापुच्छ्रे पर्यटन विकास समिति बनाईएको थियो । ति ठाउँहरु धिताल, ल्वाङ घलेल, रीभान, लाहाचोक, घाचोक, माछापुच्छ्रे, सार्दीखोला र धम्पुस हुन । । समिति मार्फत जहाँजहाँ सेन्टर पर्छ, त्यसको लागि पाँच स्थानमा क्याम्पिङको छनौट काम गरिएको थियो, पोर्टर सेल्टर र किचेनको लागि । ति ठाउँ माछापुच्छ्रेको हिले, रीभान लाहाचोकलाई छोएर लल्का र माछापुच्छ्रेलाई छोएर पिपरा साईडमा पिर्लेचुमा क्याम्प साईड बन्यो । त्यहि रुटमा खुमईमा र कोर्चा हुँदै मेश्रममा गरि पाँच वटा क्याम्प बनाईयो ।
त्यो समितिले १ वर्षको कार्यकालमा काम गर्यो र आयोजना पनि सकियो । त्यो बेलामा बनेको तदर्थ समिति पनि विघटन भयो । अर्को नयाँ समितिले जिम्मेवारी पायो तर समितिले कुनै काम गर्न सकेन । म त्यसमा पनि थिईन भक्त बहादुर गुरुङले भन्नुभयो ।
टानले पनि टान मोडल ट्रेक भनेर नाम राखेर १ वर्षसम्म राम्रै काम गरेता पनि आफैंले रुट बनाएर राम्रो कामको शुरुवात गरेको संस्थाले त्यसपछि कुनै काम गरेन र चासो पनि दिएन र बिर्सियो । हामीले बारम्वार टानमा गएर हारगुहार गर्यौंं तर टानले चासो दिएन र पर्यटकहरुको आवतजावत पनि बन्द भयो ।
कसैले पनि चासो नदिएपछि हामीलाई निकै दुःख लाग्यो । १ वर्षको शुरुको कामले प्रचार त भयो तर त्यसपछि आफैंले काम शुरु गरेको संस्था नै जिम्मेवार भएन । निकै चित्त दुःख्यो र यसै मन दुःखाएर बस्न पनि भएन भन्ने लाग्यो । २०७३ सालमा कुलप्रसाद अधिकारी, मुक्ति र मैले सल्लाह गरेर फेरी २०७३ सालबाट यसको विकासको लागि जागरुक भयौं, भक्त बहादुरले भन्नुभयो :“धेरै ठाउँहरु छन् घुम्नका लागि, यस क्षेत्रको राम्रोको कुरा त के गरेर साध्य होला र ।” त्यसपछि हामी भत्के बिग्रेको बाटो बनाउने काममा लाग्यौं । एक्यापबाट, गाउँपालिकाबाट अनुदान ल्याएर काम गर्यौं । एक्लै काम गर्न त सकिन्न, त्यसैले हामीले समुदायबाट संचालन गर्ने योजना बनायौं किनभने सामुहिक काम गर्न पनि सजिलो र फाईदा पनि समुदायले लिन सक्छ भनेर लाग्यौं ।
हामी माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको लागि पोखराबाट ४५ मिनेटको यात्रापछि सैतीघट्टसम्म पुग्नुपर्छ । लुम्रे र मर्दी खोलामा पक्कि पुल बन्न लागेकोले एक दिनमै हिमालको काखमा पुग्न सकिने यो जस्तो ठाउँ अन्त कतै छ त ? पोखराबाट सजिलै मेश्रममा बास बस्न सकिन्छ एकै दिनमा । माथि डेढ दुई घन्टाको यात्रा पूरा गरेपछि अन्नपूर्ण साउथ, अन्नपूर्ण हिमाल १, २, ३, ४, माछापुच्छ्रे, हिमचुली, लमजुङको वुद्ध हिमाल लगायतका दर्जन हिमालका दृश्य देखिन्छन ।
हामीलाई माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर क्षेत्रीले निकै सघाउनु भएको छ । उहाँले गाउँपालिकामा एक घर एक करेसावारिको अवधारणा ल्याएपछि यहाँका कृषकले घर घरमा तरकारी लगाउन थालेका छन् । सबैको घरमा तरकारी छ र आग्र्यानिक उत्पादनका सामग्रीहरु गाउँ र वजारसम्म पुगेकाका छन् । कोहि गाई, भैंसी पालनमा हुनुहुन्छ ।
होम स्टे पनि चलाएका छौं
हामीले बसको सुविधा सैंतीघट्टसम्म मात्रै भनेका छौं । त्यसपछि हाम्रो ट्रेकिङ शुरु हुन्छ । हामीले होम स्टे पनि चलाएका छौं । कुईवाङमा होम स्टे छ । हिमु, तक्रु र पुम्दुमा पनि होम स्टे रहेका छन् । पर्यटकको लागि हामीले व्यक्तिगत रुपमा नसोचेर सामुहिक हितको लागि सोचिरहेका छौं ।
माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकका लागि पोखराबाट सैंतीघट्टमा आएपछि स्थानिय मौलिक रीतिरीवाज, संस्कृति तथा अग्र्यानिक खानाको स्वाद लिन पाईन्छ । यहाँ आईसकेपछि माथि कोर्चुङ पुगेपछि दक्षिण तराईको चारकोशे झाडी, उत्तरमा माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण चार वटा, आफ्नै अगाडी माछापुच्छ्रे, उता लजमुङको वुद्ध हिमाल, हिमचुली, स्याङजाका डाँडाकाँडा, पश्चिममा पुन हिलको टावर नै देखिन्छ भने रातको समयमा पोखरा शहर झिलिमिलि देखिन्छ ।
फुलै फूलको संसार
यस्तो राम्रो ठाउँमा फागुन चैत्रमा गुँरास फुलेर जंगल रातै हुन्छ भने कोर्चुङ र त्यसमाथिका नाङ्गा डाँडाहरुमा राता, नीला फूलहरु फुलेर डाँडा नै ढकमक्क हुन्छन् । त्यहाँका फूलको बर्णन र रंगिचंगि वातावरणको बर्णन कस्ले गर्न सक्ला र ? प्राकृतिक नर्सरी देखिन्छन् डाँडापाखा, त्यस्तो दृश्य त नर्सरीमा कहाँ देख्न सकिएला र ?
जडिवुटी प्रसस्त पाईन्छ । नेपाली कागज बनाईने लोक्ता पाईन्छ । वन्य जन्तुहरु, चराचुरुङगीहरु कालिज, डाँफे, मूनाल, फोग्रास, प्यूरो, घोरल, थार, मृग, झारल देख्न पाईन्छ । माथितिर सिंग बटारिएको भेडाको साँढ जस्तो ठूलो हुन्छ, कोहि समूहमा हुन्छन् र कतै ठूलो साँडलाई एक्लै पनि देख्न पाईन्छ ।
दुवै दामली हुन ५२ वर्षका ।हर्क बहार गुरुङको जस्तौ मोडल ट्रेकका मुक्तिनाथ तिमिल्सिनाको पनि लामो अनुभव छ मोडल ट्रेकमा । उहाँले भन्नुभयो :“मैले ट्रेकिङ क्षेत्रमा काम गरेको धेरै भई सक्यो । बाटो बनाउने, डोकोमा सामान लैजाने, क्याम्पिङमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने काम गरें । संकटकाल लागेपछि केहि समय काममा सुस्तता आयो । हामी तीन कुलप्रसाद, हर्क दाई र म मिलेर सल्लाह गरेर अघि वढ्यौं, अहिले साथै यसैको प्रवर्धनको काम गरिरहेका छौं । एक पटक कोर्चुङमा पुगेपछि त्यहाँको सौन्दयै देखेर म धुरुधुरु रएको छु त्यो मनमोहक दृश्य देखेर । कोर्चुङ यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट देखिने दृश्य अन्यत्र पाईदैंन ।
यो क्षेत्रमा हामीले एउटा रुटमा १५ दिनको ट्रेकिङ गर्न सक्छौं माछापुच्छ्र्रे बेसक्याम्प गएर फर्किनलाई । अर्को कोर्चाबाट पिपरा छुनलाई ८÷१० दिनको यात्रा गर्न सक्छौं र अर्को फेरी यहि रुटबाट कोर्चा छोएर कोर्चाबाट रीभान ५ मा छुनलाई ७ दिनको यात्रा गर्न सकिन्छ । अब हामी यि तिनै रुटको आईटीनरि बनाउँदै छौं ।
भुँईभरी हिउँ थियो, अलि छेल पारेर हामीले हर्क बहादुुर गुरुङ र मुक्तिनाथ तिमिल्सिनासंग कुरा गरिरहँदा बिदा माग्ने बेला भईसकेछ त भन्दा हामी दुवै दामलि परियो ५२ वर्षका हामी पर्यटनको विकासको लागि, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको पुर्नजागरण र निर्माणको लागि लागेका छौं । यो खबर जताततै पुर्याई दिनुहोला भन्नुभयो र हामीले पनि हवस्् भन्यौं र संचारको कर्म, धर्म निर्वाह गर्ने वाचा गर्यौं । उहाँहरुसंग कुराकानि गरेको ठाउँ २६०० मिटर उचाईमा रहेको मेदाप्रुङ हो ।
कास्कीमा सुन्तला घट्यो, किसान चिन्तित
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:१९ December 4, 2020
लायन्स क्लब अफ पोखरा गण्डकी स्टेटले ग¥यो न्यानो कपडा वितरण
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:१४ December 4, 2020
सभापति देउवाद्वारा पूर्वगृहमन्त्री स्वाँरको निधनप्रति दुःख व्यक्त
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १४:२९ December 4, 2020
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ५० श्ययाको आकस्मिक कक्ष
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:३९ December 4, 2020
बाइडेनको पहिलो काम : “सय दिन मास्क लगाऔँ अभियान” सञ्चालनको तयारी
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:३३ December 4, 2020
नारायण गोपालको ३० औ स्मृतिदिवस रेडियो अन्नपूर्णद्वारा “नयापुस्तामा नारायणगोपाल” कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १०:०४ December 4, 2020
रेडियो अन्नपूर्ण ९३ .४ मेगाहर्जको आयोजनामा शुक्रबार नयाँ पुस्तामा नारायण गोपाल कार्यक्रम हुँदै
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार १६:१८ December 3, 2020